Amanqaku kaTed Dhanik Martech Zone |
Amanqaku ngu UTed Dhanik
UTed Dhanik yi-CEO kunye nomseki-kunye yenza: BDR, Inc. UTed usebenza njengeGosa eliyiNtloko lesiGqeba esongamela ukuthengiswa kweqhinga, ukuthengiswa kunye nophuhliso lweshishini, ulawulo lobudlelwane babaxhasi kunye nokufunyanwa komxholo.
NgoLwesithathu, Julayi 6, 2016 UTed Dhanik
Ukuthenga imithombo yeendaba kwi-Intanethi akufani nokuthenga umatrasi. Umthengi unokubona umatrasi kwenye ivenkile afuna ukuyithenga, engaqondi ukuba kwenye ivenkile, kwa into leyo lixabiso eliphantsi kuba iphantsi kwegama elahlukileyo. Le meko yenza ukuba kube nzima kakhulu kumthengi ukuba azi kakuhle ukuba bafumana ntoni; Kukwanjalo nakwintengiso ye-Intanethi, apho iiyunithi zithengwa zathengiswa zaphinda zafakwa kwakhona